मैलुङ खोलाको आइपीओमा ३५ गुणा बढी आवेदन, कति जनाले भरे ?
प्रकाशित : 5:28 pm, आइतबार, साउन १७, २०७८
काठमाडौं । मैलुङ खोला जलविद्युतको प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ)मा आवेदनको ओइरो लागेको छ ।
कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धका सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार आइतबार ५ बजेसम्म १७ लाख ७६ हजार ७११ जनाले २ करोड ४१ लाख ८३ हजार ४८० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । यो मागभन्दा करिब ३५.३१ गुणा बढी हो ।
« अब सांसदहरुको तलब सरकारी बैंकमा
मेरो माइक्रोफाइनान्सको नाफामा छलाङ, प्रतिसेयर आम्दानी कति ? »